पुबुदुको म्याद फेरि थपियो - Himalayan Kangaroo
पुबुदुको म्याद फेरि थपियो
Posted by Himalayan Kangaroo | ८ असार २०७२, मंगलवार १५:२५ |
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले ट्वान्टी ट्वान्टी बिश्वकप छनौटको उपाधि जित्नु आफ्नो टिमको एउटै मात्र लक्ष्य भएको बताएका छन । नेपाली टोलीको क्षमता छनौट हुने मात्र नभएर च्याम्पियन बन्ने रहेको कप्तान पारसको भनाइ छ ।
कप्तान पारसले छनौट खेलका लागि टोलीको तयारी पनि उत्कृष्ट भएको बताउदै नेपालले कडा चुनौती पेश गर्ने बताए । यदि नेपाल छनौट भएमा दोस्रो पटक ट्वान्टी ट्वान्टी बिश्वकपमा सहभागी हुनेछ । एक पटक बिश्वकप खेलिसकेका कारण यस पटकको छनौट हुने पर्ने दबाब पनि नेपाली टिममा छ । तर कप्तान पारस यसलाई अवसरको रुपमा लिन्छन ।
नेपाली टोलीले ट्वान्टी ट्वान्टी बिश्वककपको छनौट खेल संगै बिश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप समेत खेलेर स्वदेश फर्कनेछ । मंगलबार इङल्याण्ड प्रस्थान गरेको नेपाली टिमलाई सिंचाइ मन्त्ती एनपी साउद, खेलकुदमन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीले शुभकामना सहित बिदाइ गरेका थिए ।
क्यानले मंगलबारै छनौट खेलमा लगाउने नेपालको जर्सी सार्वजनिक गरेको छ भने मुख्य प्रशिक्षक पुवुदु दशानायके संग डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि सम्झौता बढाएको छ । नेपाली टोलीले बिश्वकप छनौट खेल्नु अघि २४ देखी २९ जुन सम्म इङल्याण्डमा अभ्यास खेल खेल्नेछ । त्यसपछि ३० जुन देखी ३ जुलाइ सम्म नेदरल्याण्डस संग चारवटा ट्वान्टी ट्वान्टी श्रृङखला खेल्नेछ । छनौट खेल ६ जुलाइ बाट आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्डमा सुरु हुनेछ । नेपाल रहेको समुह ए मा आयरल्याण्ड, हङकङ, पपुवा न्युगिनी, नामिबिया, अमेरिका र जर्सी रहेका छन । नेपालले आफ्नो पहिलो खेल १० जुलाइमा अमेरिका संग खेल्नेछ । ११ मा नामिबिया, १३ मा आयरल्याण्ड, १५ मा हङकङ, १७ मा पपुवा न्युगिनी र १८ मा जर्सीै संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
१४ टिम सहभागी छनौट खेलका उत्कृष्ट ६ टिमले अर्को बर्ष भारतमा हुन् ट्वान्टी ट्वान्टी बिश्वकपमा सहभागीता जनाउनेछन । यदि नेपाल बिश्वकपमा छनौट भए नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रत्येक खेलाडीलाई २ लाख ५० हजार पुरस्कारको घोषणा समेत गरेको छ । छनौट खेलपछि नेपालले बिश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियसिप अन्तर्गत २९ र ३१ जुलाइमा स्क्टल्याण्ड संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । च्याम्पियसिपका लागि क्यानले महेश क्षेत्री र अभिनाश कर्णलाई टिममा समावेश गरेको छ । नेपाल ४२ दिनको भ्रमण पछि स्वेदश फर्कनेछ ।
Previousसंविधानको विवादित विषयमा बुधवारसम्म कुरा मिल्ने
Nextपर्यटक बोलाउँदै एमाले
पुबुदुले आज मन्त्रालयमा बुझाउने कार्य योजनामा के होला ?
१३ भाद्र २०७१, शुक्रबार ०८:४८
लेष्टर सिटीका पूर्व म्यानेजर ऱ्यानिएरीलाई ‘बेन्च अवार्ड’
११ चैत्र २०७३, शुक्रबार १२:२८
नेपाल ल्याइदैं विश्वकप ट्रफी
६ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०१:५३
रियल मड्रिड छोड्न चाहन्छन् रोनाल्डो !
३ असार २०७४, शनिबार ०२:५४